4.98 (3617)Ilinganiswe ku-4.98 kokungu-5 ngokusuka kokushiwo abanye okungu-3,617.
·Ciudad de México, i-Mexico·Ingxenye Yokokuzithokozisa ku-Inthanethi kwe-Airbnb
Okokuzithokozisa okuku-inthanethi kubungazwa ngu- Graciela
· Ibungazwa nge IsiNgisi ne-Isi-Spanish
Hlangana nombungazi wakho bukhoma ku-Zoom.
Abantu abangaba ngu-15
Amaqembu azimele ayatholakala kuze kufike kwabangu-500.
U-Graciela angabungaza amaqembu angasese wanoma yibuphi ubukhulu, obufinyelela ezivakashini ezingu-500. Amanani eqembu langasese aqala ku-$211.
Qhubeka nalolu chungechunge
Lokhu kuzithokozisa kungokwesi-1 kokungu-4 ochungechungeni oluthi Yenza i-Authentic Mexican Fiesta kusuka Ekuqaleni kuya Ekugcineni
Yazana nombungazi wakho, u Graciela
Kusuka ku- $22
U-$22 umuntu ngamunye$22/ umuntu
Joyina esinye isivakashi esiyi- 1
Joyina ezinye izivakashi ezingu-3
4.98 (izibuyekezo ezingu-3,617)
Ilinganiswe ku-4.98 kokungu-5 ngokusuka kokushiwo abanye okungu-3,617.
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-3,617
Izivakashi ezineminyaka engu-2 nangaphezulu zingaba khona, ingqikithi yezivakashi ezingaba ngu-500. Abazali bangaletha izingane zabo ezingaphansi kweminyaka engu-2 ubudala.
Uzodinga ukustrima umsindo nevidiyo ukuze ubambe iqhaza.